All Tips, Tricks and Knowledge Sharing Articles | mmshare
Search Drupal Resources
All Tips, Tricks and Knowledge Sharing Articles
ရွှေကိုမလို ငွေကိုမလို အာဏာမလို - မြန်နှုံးမြင့် အင်တာနက်သာ လိုသည်
Submitted by everlearner on Sun, 03/18/2012 - 12:02
မြန်မာ လူငယ်တွေ အိမ်ပြန်အလုပ်လုပ်ဖို့ ဘာမှ မလိုပါဘူး။ ရွှေမလိုပါဘူး။ ငွေမလိုပါဘူး။ လူငယ်တွေဟာ အာဏာလည်း မမက်ပါဘူး။ အနှောင်အဖွဲ့ ကင်းစွာ၊ လွတ်လပ်စွာ ရှင်သန်လှုပ်ရှားခွင့်၊ တီထွင်ဖန်တီးခွင့်နဲ့ ပွင့်လင်း မြန်ဆန်တဲ့ အင်တာနက်တစ်ခုသာ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်ရောက်လာရင် နိုင်ငံပြင်ပမှာ ရောက်နေတဲ့ မြန်မာလူငယ်တွေ ဝမ်းသာအားရ အိမ်ပြန်လာကြမယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ယုံကြည်ပါတယ်။ သိပ်မဝေးတော့တဲ့ အနာဂါတ်တစ်ခုမှာ အမိမြန်မာပြည်ကို ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အိမ်ပြန်နိုင်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်နေမိပါတယ်။
Read more about ရွှေကိုမလို ငွေကိုမလို အာဏာမလို - မြန်နှုံးမြင့် အင်တာနက်သာ လိုသည်
ပရောဂျက် အောင်မြင်မှုကို တိုင်းတာခြင်း
Submitted by everlearner on Sun, 03/11/2012 - 15:49
"စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပရောဂျက်တစ်ခုရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအတွက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ တန်ဘိုး ဘယ်လောက်အထိ ဖြစ်ထွန်းမှု ရှိသလဲဆိုတာ အပေါ် မူတည်နေတယ်" ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ ဒါဟာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အစိုးရလုပ်ငန်းတွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အထူးအရေးကြီးတဲ့ အချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ပရောဂျက်တစ်ခုဟာ မပြီးခင်ကတည်းက အရှုံးပေါ်နေပြီ ဒါမှမဟုတ် သိပ်မကြာခင်မှာ အရှုံးပေါ်နေပြီ ဆိုရင် တစ်နေရာမှာ အကြီးအကျယ် မှားယွင်းနေပါပြီ။
Read more about ပရောဂျက် အောင်မြင်မှုကို တိုင်းတာခြင်း
အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း (၅) - မသန်စွမ်းသော်လည်း လောကကို အောင်နိုင်သူများ
Submitted by everlearner on Sun, 03/04/2012 - 13:40
ကိုယ်လက် အင်္ဂါမသန်စွမ်းပေမယ့် သန်စွမ်းတဲ့သူတွေလို နေထိုင်ပြီး ဘဝမှာ အောင်မြင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အားလုံးမှာ ရှိတဲ့ တူညီတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကတော့ "ငါလည်း လူပဲ၊ ငါလည်း လုပ်နိုင်တယ်" ဆိုတဲ့ မဆုတ်မနစ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ ခံယူချက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေတောင် ဘဝကို အောင်အောင်မြင်မြင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေနိုင်ရင် ကိုယ်လက် ပြည့်စုံ သန်စွမ်းတဲ့ ခင်ဗျားတို့၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဝမမှာ အောင်မြင်စရာ အခွင့်အလန်း ပိုများပါတယ်။
Read more about အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း (၅) - မသန်စွမ်းသော်လည်း လောကကို အောင်နိုင်သူများ
အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း (၄) - မိဘတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပါ
Submitted by everlearner on Sat, 02/18/2012 - 04:40
ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ပုံစံတစ်မျိုးတည်း သွားနေလို့ မရပါဘူး။ အလွယ်တကူ ပြောင်းလွယ်၊ ပြင်လွယ်တတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုခုကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အမြဲတမ်း အသင့်ပြင် ထားရပါမယ်။ လူတိုင်း အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဒီခေတ်မှာ ကျား/မ ခြားနားချက်ဆိုတာ မရှိသလောက် ဖြစ်နေပါပြီ။ ကိုယ်လုပ်သင့်တာကို ရဲရဲရင့်ရင့် လုပ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
ဘာပဲလုပ်လုပ် ကိုယ့်ဘဝရဲ့ အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်တဲ့ ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ မိဘတွေနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တိုင်ပင် ဆွေးနွေးပြီး သူတို့ရဲ့ အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေနဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို နည်းနာယူ အသုံးချတတ်ဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။
Read more about အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း (၄) - မိဘတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပါ
ပညာရေးမှာအောင်မြင်ဖို့ အဓိကအကျဆုံးက ဘာလဲ
Submitted by NWAung on Fri, 02/10/2012 - 07:09
ပညာရေးဆိုတာ လူ့ဘဝရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအရာတွေထဲက တစ်ခုပါ။ "ပညာရွှေအိုး လူမခိုး" ဆိုတဲ့ စကားပုံလေးလည်း ရှိပါတယ်။ ပညာသာတကယ်ရှိရင် ကျန်တာတွေရှိဖို့ သိပ်မခဲယဉ်းတော့ပါဘူး။ "ပညာ" ရှိမှသာ အကောင်းအဆိုး၊ အကြောင်းအကျိုး၊ အမှားအမှန်ကို ဝေဖန်ခွဲခြားနိုင်တဲ့ ဉာဏ်ရှိမှာပါ။ အဲဒီလိုဆိုရင် ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် ပညာရေးမှာအောင်မြင်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးမှာပါပဲ။ အဲဒါဆိုရင် ပညာရေးမှာအောင်မြင်ဖို့ အဓိကအကျဆုံးအရာက ဘာများလဲ။
Read more about ပညာရေးမှာအောင်မြင်ဖို့ အဓိကအကျဆုံးက ဘာလဲ
အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း (၃) - ဥပဒေကို အသုံးချ
Submitted by everlearner on Sun, 02/05/2012 - 14:12
တကယ်တော့ ကံကောင်းတယ် ဆိုတဲ့သူ မရှိပါဘူး။ အလုပ်ကောင်းကောင်း လုပ်တဲ့သူတွေပဲ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ယုံကြည်ချက်တစ်ခု ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိနေပြီးသားဆိုရင် ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို တခြားသူတွေ လက်ခံအောင် စည်းရုံးလို့ ရပါပြီ။ တစ်ကြိမ်မှာ တစ်ယောက်ကနေ စပြီး စည်းရုံးပါ။ ဥပဒေဆိုတာ ကြောက်စရာ၊ ရှောင်ပြေးစရာ မဟုတ်ပါဘူး။ အသုံးချစရာပါ။ ဥပဒေဆိုတာ သိသူဖော်စား မသိသူကျော်သွား ပါပဲ။
ဘဝဟာ တစ်ကယ်တော့ တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးတာတွေနဲ့ ပြည့်နေတာပါ။ အဲဒါကြောင့် မလုပ်ဖူးတာ တစ်ခုခု ကောင်းရာကောင်းကျိုးတစ်ခုကို စပြီးလုပ်ဖို့ ဘယ်တော့မှ နောက်မကျ ပါစေနဲ့။ ကိုယ်မကျွမ်းကျင်ရင် ပိုကျွမ်းကျင်အောင် ကြိုးစားပါ။ ဒါမှမဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူကို ရှာပါ။ အသုံးချပါ။ သင့်ရဲ့ ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ဈေးကွက်တင်တဲ့အခါ ကလေးတွေရဲ့ နည်းဗျုဟာကို ပါးနပ်လိမ်မာစွာ အသုံးပြုဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
Read more about အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း (၃) - ဥပဒေကို အသုံးချ
အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း (၂) - သူတို့ကြောင့်လား
Submitted by everlearner on Thu, 01/26/2012 - 15:02
ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ တခါတရံ မလိုအပ်ဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အရမ်းထည့်တွက်နေမိ တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို လုံးဝ လစ်လျုရှုထား လိုက်ရတော့မလားလို့ မေးစရာ ရှိလာပါတယ်။ တကယ်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို နေရာတိုင်း၊ အချိန်တိုင်းမှာ ထည့်တွက်စရာ မလိုပါဘူး။
ဘယ်လိုအချိန်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်က အရေးကြီးပြီး ဘယ်အချိန်တွေမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်စရာ မလိုသလဲဆိုတာ သိထားရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ပိုပြီး တွင်ကျယ်လာပါ လိမ့်မယ်။
Read more about အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း (၂) - သူတို့ကြောင့်လား
အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း - ကိုယ်သာတရားခံ
Submitted by everlearner on Tue, 01/24/2012 - 15:12
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဝခရီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာ တစ်ခုခု လုပ်မယ်ကြံတိုင်း အတားအဆီးတွေ ရှိနေတာ ကြုံဖူးမှာပါ။ အဲဒီ အတားအဆီးတွေကို အုပ်စုခွဲကြည့်ရင် အပြင်ကလာတဲ့ အတားအဆီးနဲ့ အတွင်းကလာတဲ့ (ကိုယ့်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့) အတားအဆီးတွေဆိုပြီး နှစ်စု တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အရိုးသားဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးကြည့်/ဖြေကြည့်ပါ။ "ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် ပြန်တားဆီး ထားမိပြီလဲ"။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်တားဆီးထားမိလို့ မလိုအပ်ဘဲ ကြန့်ကြာနေရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ အဖြေတွေကို အခုလို လေ့လာ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
Read more about အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း - ကိုယ်သာတရားခံ
Mobile Phone သုံးလျှင် သတိထားရမည့် လျှပ်စစ် အန္တရာယ်များ
Submitted by everlearner on Sat, 01/07/2012 - 06:37
Handset ကောင်းကောင်းတစ်ခုရှိထားပြီး အင်တာနက်လိုင်းလေးလည်း ရှိခဲ့ရင် ဖုန်းပြောတာအပြင်၊ စာဖတ်၊ အင်တာနက်ကြည့်၊ Chatting လုပ်၊ Twitter, Facebook သုံး၊ အီးမေးလ်လက်ခံ၊ ဂိမ်းကစား - စတဲ့ သာမန် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ ထိုင်ပြီးလုပ်နေရတဲ့ အလုပ်အားလုံးနီးပါးကို သွားရင်းလာရင်:၊ ရထားစီး ကားစီးရင်း၊ အိပ်ယာထဲ လှဲရင်း၊ နောက်ဆုံး အပေါ့အလေးသွားရင်း ချက်ချင်း လုပ်လို့ ရပါတယ်။ အဲဒီလို အသုံးတွင်ကျယ်လာတဲ့ ဖုန်းတွေဟာ လူတိုင်းအတွက် နေ့စဉ်ဘဝမှာ အရေးပါတဲ့ အသုံးအဆောင်တစ်ခု ဖြစ်လာတာ မဆန်းပါဘူး။
လက်ကိုင်ဖုန်းလေးတွေကို သုံးဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ Battery ကို အားသွင်းတဲ့အခါ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား တွဲလာတဲ့အခါ သတိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ဂရုစိုက်ပြီး ဖုန်းသုံးတဲ့အခါ သတိထားလိုက်ရင် − လက်ကိုင်ဖုန်း Shock ဖြစ်တာ၊ မီးလောင်တာ၊ ပေါက်ကွဲတာ − အစရှိတဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာ တော်တော်များများကို ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ပါ လိမ့်မယ်။
Read more about Mobile Phone သုံးလျှင် သတိထားရမည့် လျှပ်စစ် အန္တရာယ်များ
လုပ်ငန်းများ အမြန်ပြီးမြောက်စေမည့် နည်းလမ်းများ
Submitted by everlearner on Sun, 12/18/2011 - 11:03
နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်စရာတွေ များလွန်းတဲ့ ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ တကယ်အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တွေနဲ့ အရေးမကြီးတဲ့ အလုပ်တွေ ရောထွေးနေပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အရေးမကြီးတာတွေကို အလျင်စလို ပြီးအောင်လုပ်နေရင်းနဲ့ တကယ်အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တွေအတွက် အချိန်မကျန်တော့တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
သင်ဟာ ကိုယ့်ဘာသာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ Freelancer တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူများဆီမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လက်အောက်က အခြားသူတွေကို စီမံအုပ်ချုပ်နေရတဲ့ ပရောဂျက် ခေါင်းဆောင်၊ မန်နေဂျာတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ နောက်ဆုံး အိမ်အလုပ်တွေကို လုပ်တဲ့အခါမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခုသိခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေက အထောက်အကူ ရစေပါလိမ့်မယ်။
Read more about လုပ်ငန်းများ အမြန်ပြီးမြောက်စေမည့် နည်းလမ်းများ
Recent Public Lists
Want to create your own Private or Public Lists like this? Login or Register and start your own... :)
Drupal and Design
Archive of Discussions from Drupal Myanmar Facebook Group
Vote, Review, Multi Axis Vote, Five Star
Staging, Deployment and Using Feature
Drupal Module, Distributions, CMS Comparisons
Network Sniffing Tools & Techniques
Useful Free Software Tools
PHP Settings Knowledge Base
ASCII Art Collections
Free Drupal Tutorials Series
Drupal Entity Reference and Views
Embedding Views as Node Content or Views Field
Useful articles from Facebook
Checking suspicious phone numbers from unknown sources
Mixing Portrait and Landscape Layouts in Microsoft Word
Subscribe RSS or
Read by Email or Join
Drupal Myanmar group or Like Drupal Myanmar page on Facebook
Download Our Free Technical eBooks in Myanmar Language
Gmail Tips & Tricks, Security Best Practices PDF, 1.9 MB
How to Speed Up Our Websites PDF, 1.1 MB
Web Development Best Practices PDF, 0.4 MB
Over 5311 Downloads for all books and counting...
We are using Myanmar Unicode. Download Myanmar Unicode Fonts & Keyboards here.
More information about Unicode, Please read here...
Three Takeaways from 2015
Living in DECIDE - Second Grid of Eisenhower Matrix
အလုပ် နဲ့ ငွေ
ကုသိုလ် ပညာ ဥစ္စာ ရဖို့
အလုပ်ပြောင်းလိုသူများ အတွက် အရေးကြီး အချက် ၃ ချက်
Kudos!!2years 10 months ago
Request3years4weeks ago
Bookmark for drupal3years4weeks ago
Multiple Search box3years2months ago
Please install at least one Myanamr Unicode4years3months ago
Can't read unicode4years4months ago
Great idea bro!4years5months ago
To - Learn, Share, Do Business together with Drupal platform.
Drupal Tips & Tricks
Getting Started in Drupal Views2Module - Display, Basic, Page and Block Settings
Backuping Drupal Database and Files With Backup & Migrate Module or Drush
Multiple Content Types OR Multiple Taxonomy, What is the best solution in Drupal way?
Do We Need Drupal for Our Website Development?
Using Gmail as SMTP Server with Drupal PHPMailer Module
More Drupal Articles...
Splitting Components of the Websites Across Different Domains to Speed up Our Websites
How To Optimize Our Web Sites With GZIP Compression - Part Two
Avoid 301 Website Link Redirect
Minimizing the Number of iframes Usage to Speed Up our Websites
More Performance Tips...
Resources for Self Study
How to DoaProper Research for Our Projects, Challenges, Clients, Life and Community
How to read the Smashing Magazine Articles effectively and prepare for future references and developments
Understanding Drupal - Core Modules, Node and Content Types
Identifying Systems Problems - စနစ်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း
Collections of Keynotes, Videos and Presentations from DrupalCon Chicago 2011
More Self Study Tips...
About us | Mobile Site